Home Wararka QM oo DFS ku eedeysay in danbiilayaal xilal sare u dhiibtay
QM oo DFS ku eedeysay in danbiilayaal xilal sare u dhiibtay
Dowladda Federaalka Soomaalia ayaa lagu Eedeeyay in xubno dambiyo galay ay xilal sar sare u dhiibtay.
Qoraal ay soo saartay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya jagooyin sar-sare u dhiibtay shaqsiyaad galay dambiyo.
Shaqsiyaadka Hay’addda ay eedeysay ayaa lagu sheegay in ay galeyn tacadiyo ka dhan ah Xuquuqda bini’aadamka.
Hay’adda HRW ma aysan magacaabin xubnaha ay tilmaamtay in ay dambiyo galeen,sidoo kale ma aysan sheegin goobaha loo xushay.
Dhanka kale, warbixinta HRW ayaa tibaaxday in sanadkii hore ay Soomaaliya ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha sida dilka shacab iyo beegsiga warbaahinta Madaxa banaan.
Hay’adda HRW ayaa si iskugu mid ah ugu eedeysay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Al-shabaab in ay Mas’uul kawada yihiin dhibaatooyinka ka dhacaya, sida dilalka.
Dhanka kale Hay’adda ayaa sheegtay in Maxkamadda ciidamadda Qalabka Sida in dil toogasho ku fulisay 16 ruux oo lala xiriiriyey argagixiso, talaabadaas oo meel ka dhack u ah nidaamka cadaalada caalamka.
Sidda ku cad warbixinta, xafiiska Qaramada Midoobay ayaa tan iyo bartamihii bishii November wuxuu diiwaan-geliyey 1,154 kiis oo kusaabsan khasaaro soo gaarey shacab,kuwaasi oo kasoo gaaray qaraxyada dalka ka dhacaya.
Ugu dambeyntii , Human Rigts Watch ayaa sheegtay in xiriirka sii xumaanaya ee Dowladda Dhexe iyo Dowladaha xubinta ah federaalka Soomaaliya ay wiiqday xal u helida gabood-falada ka dhacaya dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa inta badan lagu eedeeyaa in xilal kula deg degto xubno shabaab kasoo laabto,waxaana Hay’adaha amaanka gaar ahaan NISA Maamula xubno shabaab kasoo goystay taasi oo Qaramadda midoobay dhowr jeer ka hadashay.